Justintime: Yakapfuma Webhu, Nhare uye Mahwendefa Prototypes | Martech Zone
Justintime: Yakapfuma Webhu, Nhare uye Hwendefa Prototypes
Muvhuro, September 23, 2013 Muvhuro, September 23, 2013 Douglas Karr
Justintime Prototyper inokutendera iwe kuvaka inofambidzana yakapfuma webhu, nharembozha uye piritsi wayaframes. Justintime Prototyper inogonesa kugadzirwa kweanopindirana prototypes nezviito uye zvinoshamisa maitiro Iwe unogona kunyange prototype data-inotyairwa maapplication uye fomu kusimbiswa pasina kana imwechete tambo yekodhi. Ona mienzaniso yePrototyper pane yavo saiti.
Justintime Prototyper maficha:
Nhare Yekushandisa Maitiro - Nakidzwa prototyping yako nharembozha ine simba asi iri nyore kushandisa chishandiso dhizaini masaini, shanduko, mhedzisiro uye kunyange kuteedzera inoteerera dhizaini. Uye iwe unogona kuyedza yako prototype pane mbozhanhare.
Kubatana kwakaitwa Nyore - Shambadzira, ugovana uye uwane mhinduro yakakosha kubva kune vashandisi nevatengi uye tora yako yese timu ishandire pane imwechete prototype panguva imwe chete. Iwe haufanire kuisa chero chero sevha server.
Zvese-mu-One App Prototyping Turu - Justinmind inopa yakazara yakazara seti yekudyidzana uye majeti ekushandisa kwewebhu asiwo kune vakanyanya vatambi mune nhare yekushandisa nzvimbo: iPhone, iPad, Android, uye Windows Runhare.
Justintime inopa pamwedzi, pagore uye nekusingaperi marezinesi pamwe neyemahara vhezheni. Dhawunirodha vhezheni yako ikozvino.
Tags: droid prototypeinowirirana wireframeprototypenguva chetemobile prototypezvikabvaprototyperwebhu prototypewindows prototypewireframe
Vibes Wallet maneja: Yambuka-Platform Nharembozha
Nei Yako Inotevera WordPress Dingindira Inofanirwa Kuteerera